सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन्
Tuesday, 06.23.2015, 12:16pm (GMT5.5)
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले मुलुकको चिनारी बनेर खडा भएका विश्व सम्पदा सूचीका ऐतिहासिक धरोहरहरू ध्वस्त भयो । यसले व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । तर, के ती सम्पदाहरू यसपटक मात्र ध्वसत भएका हुन् त ? पक्कै हैन । नेपालमा ७६२ वर्षयता नेपालमा थुप्रैपटक विनाशकारी भूकम्प गएको छ र व्यापक जनधनको क्षति भएको छ । फरक के मात्र हो भने पुस्ता अन्तरले त्यसलाई ओझेलमा पार्दछ । त्यस्तै १२ गतेको भूकम्पले यसअघिका विनाशकारी भूकम्पहरूलाई छायाँमा पार्याे । झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने ५ खर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भयो । त्यस्तै समग्र क्षतिको आँकलन गर्दा १० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।
यसका अतिरिक्त नेपालको चिनारी मानिएका ऐतिहासिक, पौराणिक सम्पदाहरू नष्ट भयो । यो पुस्ताले यो नै नेपालको सबभन्दा ठूलो भूकम्प हो भन्ने ठान्यो । तर भूकम्पविदुहरूका अनुसार वि।सं। १३१० यता मात्र यस्ता भूकम्प धेरैपटक गएका छन र पुनःनिर्माण भएको छ । त्यसैले सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने हो भने हाम्रा सम्पदा हामीले नै बनाउन सक्नेछौं । सयौं वर्ष पहिले कोही विदेशी आएर ती सम्पनाको पुनःनिर्माण गरिदिएका थिएनन् ।
इतिहास साक्षी छ– ७६२ वर्षयता नेपालमा थुप्रैपटक विनाशकारी भूकम्प गएको छ किनभने नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमको उच्च सूचीमा छ । तैपनि आधुनिक प्रविधिको विकास भएयता मात्र हैन विभिन्न ऐतिहासिक शिलालेखहरूका आधारमा भने नेपालमा विसं १३१० यताको मात्र भूकम्पको तथ्य फेला परेको छ ।
सो समययता पटकपटक विनाशकारी भूकम्प गएका छन्, धेरै जनधनको क्षति भएको छ । विसं १३१० यता विभिन्न समयमा गएका भूकम्पबारे चर्चा गरिको छ । किनभने त्यसअघिका भूकम्प सम्बन्धमा कुनै अभिलेख छैन । विसं १३१० को भूकम्पले तत्कालीन राजा अभय मल्लको भूकम्पमा निधन भएको थियो । धेरै जनधनको समेत क्षति भयो । तत्कालीन समयमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्य नै छैन ।
हुन त शक्तिशाली भूकम्प १०० वर्षमा मात्र जाने भन्ने वैज्ञानिकहरूको कथन भए पनि नेपालमा छोटो छोटो समयमा विनाशकारी भूकम्प गएको अभिलेख छ । वि.सं. १३४६ मा पहिलेको जस्तै शक्तिशाली भूकम्प गएको पाइन्छ । सो भूकम्पपछि काठमाडौँ महेन्द्रनाथको देवललगायत धेरै मठमन्दिर भग्नावशेषमा परिणत भएका थिए ।
त्यस्तै १०० वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि भूकम्प नगएको दृष्टान्त छ । विसं १७३७ बाट एकैचोटी १८८० मा गएको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । ती दुई ठूला भूकम्पले तत्कालीन अवस्थामा जनधनको धेरै क्षति भए पनि सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू कति विनास भए भन्ने अभिलेख भेटिँदैन ।
त्यसको १० वर्षपछि विसं १८९० मा ठूलो भूकम्प गयो । त्यसले भिमसेन थापाले बनाएको धरहरा, थुप्रै दरबार र भादगाउँ क्षेत्रका धेरै मन्दिरहरूलाई क्षति पुर्याएको थियो । भिमसेन थापाले विसं १८८४ तिर हालको बागदरबार नजिकै (हालको धरहराभन्दा २०० मिटर पर) बनाएको ११ तले भिमसेनस्तम्भ छ वर्षकै अन्तरालमा ढलेको थियो ।
विसं १९९० को भूकम्पले नेपालका सम्पदा क्षेत्रमा ठूलै क्षति पुर्यायो । त्यसले काठमाडौंमा विसं १६२१ मा बनेको तलेजु मन्दिर विसं १७२७ मा बनेको प्रताप स्तम्भ, महेन्द्र मल्लको पालामा विसं १६२१ मा बनेको काठमाडौं महादेव, जगत मल्लको पालामा बनेको महाविष्णु मन्दिर, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बनेको बसन्तपुर दरबार र रानीपोखरीको प्रताप मल्लले बनाएको शालिक क्षतिग्रस्त भयो ।
पाटनमा शिवसिंह मल्लको समयमा बनेको देगुतलेजु, योगमतीको समयमा बनेको बनेको च्यासिंगदेवल, कृष्ण मन्दिर, पाटनको महावौद्ध, विशेश्वर महादेव मन्दिर, कुम्भेश्वर, मच्छिन्द्रनाथ जस्ता धेरै सम्पदा ध्वस्त भएकोमा पछि पुनः निर्माण गर्ने काम गरियो ।
भक्तपुरको पुरानो दरबार, ५५ झ्याले दरबार, कृष्ण मन्दिर, यक्ष मल्लले बनाएको शिव मन्दिर, भूपतिन्द्र मल्लले बनाएको भैरव मन्दिर, बाराही मन्दिर ध्वस्त भए जसलाई पछि पुननिर्माण गरियो ।
यस वर्षको भूकम्पले मध्यकालीन वास्तुकलामा प्रसिद्ध हनुमानढोका दरबारभित्रका १६ औँ र १७ औँ शताब्दीका माजुदेग, त्रैलोक्यमोहन, काष्ठमण्डप, विष्णु मन्दिर र कृष्ण मन्दिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको छ । दरबार क्षेत्रभित्रका मोहनकाली चोक र सुन्दरी चोकतर्फका भागहरू भत्केका छन् ।
नासल चोकको पश्चिम दक्षिण लोंह चोकको केही भाग भत्केको छ । यसभित्रका भक्तपुर र काठमाडौँ टावर पूर्णरुपमा भत्केका छन् । ललितपुर र कीर्तिपुर टावर आंशिक भत्केका छन् । पाटन दरबार क्षेत्रका सत्रौं शताब्दीदेखिका कला र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएका चारनारायण, शंकर नारायण मन्दिर र मणिमण्डप भत्केका छन् । पाटनमा प्रस्तरकलाका अनुपमस्थलहरू कृष्ण मन्दिर र राधाकृष्ण मन्दिर नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् । हरिशंकर मन्दिर, चारनारायण मन्दिर, मच्छिन्द्रनाथको जात्राका लागि साइत निकाल्ने पाटी (सोह्रखुट्टे पाटी( भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको छ ।
भक्तपुर दरबार क्षेत्रका वत्सला, केदारनाथ मन्दिर, तवसत्तल, पूर्वेश्वर महादेव, शिव मन्दिर, शिलु महादेव, भैरवनाथको पार्टी र लाल बैठक नष्ट भएको छ । अन्य संरचना आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त छन् । स्वयम्भूमा अनन्तपुर, कर्मराज महाविहार, देवधर्म महाविहार र तिव्वतीय छोर्तेन क्षतिग्रस्त छन् भने पुरातात्विक महत्वका हयगृव भैरव मन्दिर, बुङमतिको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर र बनेपाको चण्डेश्वरी मन्दिरहरूलाई यस पटकको भूकम्पले बाँकी राखेन ।
नेपालीहरू नयाँ वर्षको खुसीयाली मनाउँदै भावी दिनको योजना बुन्दै गरेको बेला वैशाख १२ गते गएको भूकम्प वि।सं। १९९० पछिको पहिलो हो । सो भूकम्प ७२ वर्षपछि गयो । तर, यसबीचमा २०४५ सालमा पनि शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । त्यसले पनि ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो ।